Sida loo hagaajiyo qaladka darawalka WIA | Madasha Mobile -ka
Ignacio Sala | 24/09/2021 12:00 | Tababarada
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho daabacaha ama iskaanka ku xiran kombiyuutarkaaga, waxaad fursad u leedahay inaad la kulanto dhibaato la xiriirta darawalka WIA. Maqaalkan, waxaan kuugu sharxi doonnaa, waxa saxda ah Khaladka darawalka WIA, maxay yihiin koodhadhka qaladka WIA iyo maxay yihiin xalka dhammaan khaladaadka uu daabacahan iyo darawalka iskaanku ina tusi karo.
Khaladka lagu xakameynayo WIA waa qalad iskaanka ama daabacaha, qalad inta badan nagu martiqaadaya inaan jir ahaan la falgalno daabacaha si aan u xallino. Waqtiyada kale, waxay nagu martiqaadaysaa inaan dib u rakibno wadayaasha daabacaha ama si toos ah dib ugu bilowno darawalka WI
Sida telefoonka loogu xiro daabacaha
1 Waa maxay darawalka WIA
2 Xeerarka qaladka WIA iyo xalalkooda
3 Xalalka kale ee qaladka darawalka WIA
3.1 Dib u bilow Hawlgalka Darawalka WIA
3.2 Beddel hawlgalka darawalka WIA
3.3 Dib u rakib software -ka daabacaha
3.4 Dib u rakib Windows
Waa maxay darawalka WIA
WIA waxay u taagan tahay Qaadashada Sawirka Windows, darawalka ay abuurtay Microsoft taas waxay u oggolaaneysaa isgaarsiinta daabacaha ama iskaanka in aan ku rakibnay kombiyuutarkeena ama shabakadda, hubi in aysan had iyo jeer gacmaha la socon software -ka daabacaha. Farriinta ugu badan ee la xiriirta darawalkan ayaa muujinaysa farriinta soo socota:
Waxaad u baahan tahay darawal WIA si aad u isticmaasho qalabkan. Fadlan ka rakib CD rakibidda ama websaydhka soo -saaraha oo isku day mar kale.
Farriintan waxay nagu wargelinaysaa inay jirto a dhibaatada isgaarsiinta ee daabacahaAma darawalka Windows ayaa kharribmay iyo / ama darawalada ay bixiyaan soo saaraha daabacaha uma shaqeeyaan sidii la rabay. Xalka ugu fudud ayaa noqon doona in dib loo rakibo barnaamijka daabacaha, hase yeeshee, tani mar walba ma aha kiiska.
Madbacadaha 4D: Maxay yihiin maxayse qaban karaan?
Xeerarka qaladka WIA iyo xalalkooda
Hoos waxaan ku tusaynaa liis leh dhammaan noocyada khaladaadka ee ay Windows na tusi karto Markaad dhibaato xagga isgaarsiinta ka haysato daabacaha ama iskaanka. Marka xigta koodka qaladka, xalka dhibaatada iyo koodhka la muujiyo marka koodh khaldan uusan muuqan ayaa la soo bandhigayaa.
WIA QALAD _ _ BUSY Qalabku waa mashquul. Xir codsiyada isticmaalaya aaladda ama sug inta ay ka dhammaanayso oo isku day mar kale. 0x80210006
WIA _ QALAD _ QARAN _ FURAN Mid ama in ka badan daboolka qalabka ayaa furan. 0x80210016
XIRIIRKA _ AQALKA QALADKA _ KA SOO JEEDA _ Khaladka isgaarsiinta ee aaladda WIA. Hubi in qalabku daaran yahay oo ku xiran yahay kombiyuutarka. Haddii dhibaatadu sii socoto gooyso oo dib ugu xir qalabka aaladda kombiyuutarka. 0x8021000A
QALABKA QALADKA WIA _ _ _ LOO QAADAY Qalabku wuu xidhan yahay. Fadlan xiro codsiyada adeegsada aaladdan ama sug inta ay ka dhammaanayso oo isku day mar kale. 0x8021000D
WIA _ _ KA -QAADASHO QALDAN KU JIRA _ _ WADAHA Darawalka qalabka ayaa tuuray wax ka reeban. 0x8021000E
QALAD _ GUUD WIA _ _ Khalad aan la garanayn ayaa ka dhacay aaladda WIA. 0x80210001
QALADKA WIA _ _ QARANKA HARDWARE _ _ HABEEN Waxaa jira goob aan sax ahayn aaladda WIA. 0x8021000C
TILMAAN MAYA _ QALAD QIIMEEYA _ WIA _ Qalabku ma taageerayo amarkan. 0x8021000B
QALADKA WIA _ JAWAAB KONTOROOLE MA AHA _ _ _ WAALAN Jawaabta koontaroolaha ma xuma. 0x8021000F
WAXAA QALDAN WAXYAABA _ _ _ LAGA SAARAY Qalabkii WIA waa laga saaray. Hadda lama heli karo 0x80210009
WIA _ QALAD _ LAMP _ OFF Iftiinka falanqeeyaha waa dansan yahay 0x80210017
DAABACAADII UGU WEYNAYD EE KU SOO DHAWEYSAY _ _ QALADKA _ _ KA SOCDA _ WIA Shaqadii iskaanka ayaa la joojiyay maxaa yeelay wax -soo -saaraha / Taageeraha ayaa gaadhay qiimaha ugu badan ee saxda ah ee WIA IPS PRINTER ENDORSER COUNTER waxaana _ _ dib loogu hagaajiyay _ _ 0. Astaantan ayaa la heli karaa laga bilaabo Windows 8. 0x80210021
XIGASHO BADAN _ QALADYADII _ WIA Baadhitaanku wuu fashilmay sababtuna waa xaaladda font-ka ee bogag badan leh. Tilmaamahan ayaa la heli karaa laga bilaabo Windows 8. 0x80210020
QALADKA WIA _ MAYA _ XIRIIR Qalabku waa khad la'aan. Hubi in qalabku daaran yahay oo ku xiran yahay kombiyuutarka. 0x80210005
DOQAANKA QALADKA WIA _ _ _ FARAN Ma jiro wax dukumiinti ah oo ku jira xaashida dukumiintiga / saxaarad. 0x80210003
WIA _ KHALAD _ WARQAD _ JAM Waraaqdu waxay ku cufan tahay xaashida dukumintiga falanqeeyaha / saxaarad. 0x80210002
DHIBAATOOYINKA WARQADDA _ QALADKA KA YIMAADA _ Dhibaato aan la cayimin ayaa ka dhacday quudiyaha / saxanka xaashida dukumiintiga. 0x80210004
_ WIA _ DAREEN _ QALAD QALDAN Qalabku wuu daaran yahay 0x80210007
QALADKA WIA _ _ FASIRKA ISTICMAALKA Dhibaato ayaa ka jirta aaladda WIA. Hubi in qalabku daaran yahay; onlaynka ah iyo in fiilooyinku si sax ah ugu xidhan yihiin. 0x80210008
WIA _ S AQAL AAN LAHAYN _ _ _ LA HELI KARO Qalab iskaanka lama helin. Hubi in qalabku yahay onlayn; ku xiran kombiyuutarka iyo inaad haysato darawalka saxda ah ee lagu rakibay kombiyuutarka. 0x80210015
Midabka ugufiican ama madoow iyo madoow madbacadaha waxqabadka badan
Xalalka kale ee qaladka darawalka WIA
Haddii aad gaadhay qaybtan, waa sababta oo ah koodhadhka qaladka ah ee aan ku tusay qaybtii hore, midda soo muuqata lama tuso. Hadday sidaas tahay, markaa waxaan ku tusi doonnaa dhowr habab oo u baahan gelitaanka Adeegyada Windows, marka waa inaan iska jir waqtiga samaynta wax -ka -beddelka aan tilmaamaynno.
Dib u bilow Hawlgalka Darawalka WIA
Sidaan had iyo jeer u idhaahdo, dib -u -bilaabista waqtigeedu waa laba qiimood. Si joogto ah dib -u -bilawga aaladdayada moobiilka iyo PC -gaagu waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee aaladdayadu u sii waddo shaqada sidii maalinta koowaad.
Mararka qaarkood darawalka WIA ayaa laga yaabaa si khaldan u fasiray amarada hawlgalka qaarkood iyo, si kasta oo aan kombiyuutarka dib ugu bilawno, wuxuu sii ahaan doonaa mid xumaada.
Habka ugu horreeya ee ay tahay inaan isku dayno waa a si toos ah u bilaw hawlgalka xakamaynta iyada oo loo marayo Adeegyada Windows. Si aan u fulino hawshan, waa inaan fulinaa tallaabooyinka aan si faahfaahsan hoos ugu faahfaahinayo:
Marka hore, gal sanduuqa raadinta Windows oo ku qor “services.msc” adigoon soo xigan si aad u hesho Adeegyada Windows.
Mar haddii la furay daaqaddii muujinaysay Adeegyada Windows ee hadda shaqaynaysa, waan tagnaa Qaadashada Sawirka Windows (WIA asagoo ku qoran af -ingiriisi).
Si aad dhakhso ugu hesho, waxaa lagugula talinayaa inaad gujiso khaanadda Magaca si dhammaan adeegyada loogu muujiyo xarfaha oo ay u fududaato helitaanka shaqadan.
Marka xigta, waxaan dul saarnaa jiirka adeegga Qaadashada Sawirka Windows, waxaan riixnaa badhanka jiirka midig oo dooro ikhtiyaarka Dib u Bilow.
Beddel hawlgalka darawalka WIA
Habkani wuxuu shaqeynayaa oo kaliya markaan haysanno Dhibaatooyinka waxqabadka ee kontoroolaha WIA, taas oo ah, marka aysan jirin dhibaato kale oo kor ku xusan, dhibaatooyinka lagu xaliyo isdhexgalka daabacaha (daaran, ka saar warqadda ciriiriga ah, hubinta warqadda ...)
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa helitaanka sanduuqa raadinta Windows oo ku qor “services.msc” iyadoon la soo xigan si loo helo Adeegyada Windows.
Mar haddii la furay daaqaddii muujinaysay Adeegyada Windows ee hadda shaqaynaysa, waan tagnaa Qaadashada Sawirka Windows.
Marka xigta, waxaan gujinnaa badhanka midigta midig iyo waxaan dooranaa Guryaha.
Gudaha Soo gal, waxaan xulanaa Koontada nidaamka deegaanka sidoo kale calaamadee sanduuqa U oggolow adeegga inuu la falgalo desktop -ka.
Ugu dambeyntii waxaan gujinaynaa aqbalaan waxaana dib u bilownay qalabkii.
Marka aan dib u bilowno kombiyuutarkeena, qaladkan horeba waxay ahayd in la hagaajiyo.
Dib u rakib software -ka daabacaha
Sidii aan soo sheegay, koontaroolkani caadi ahaan wuu shaqeeyaa, had iyo jeer maahan, gacanta gacanta software -ka daabacaha. In kasta oo Windows ay awood u leedahay inay aqoonsato daabacayaasha badankood ee ku xiran a Windows 10 kombiyuutar, kaliya rakib darawalada aasaasiga ah si aad u awooddo inaad daabacdo iyo iskaan.
Haddii ay tahay scanner leh daabacad, had iyo jeer ma rakibi doono labada darawalba. Sababtaas awgeed, waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan rakibno softiweerka culus ee soo -saarayaasha daabacaha, softiweerka oo kooxdayada ka buuxiya codsiyo aan waxtar lahayn oo aanan waligeen adeegsan doonin. Codsiga noocan ah waxaa badanaa laga helaa laptopsyada la iibiyo waxaana loo yaqaan Bloatware.
Dib u rakib Windows
Haddii aynaan heli karin dhibaatada xakamaynta WIA, xalka kaliya ee noo haray waa dib u rakib daaqadaha meel xoqan. In kasta oo ay run tahay in Windows ay na siiso suurtogalnimada dib u soo celinta Windows annaga oo tirtirna dhammaan waxyaabaha ku jira oo aan ka tagno nidaamka sida hadda loo rakibay, haddana waxaa suurtogal ah in dhibaatada daabacaha aan la xallin.
Markaad dib u rakibayso Windows meel xoqan, waxaan ka saari doonaa dhammaan qashinka aan urursannay tan iyo markii ugu dambaysay ee aan qaabaynay, sidaa darteed waxay sidoo kale noo oggolaan doontaa inaan ka soo kabanno waxqabad aan luminay sannado badan.
Waa inaan maanka ku haynaa in marka hore ay tahay inaan dib u soo celi dhammaan waxyaabaha ku jira oo aan ku kaydinay kombiyuutarkeena, ama ha ahaato meel lagu kaydiyo daruuraha ama isticmaalka nidaamka gurmad marka loo eego daaqadaha ayaa noo diyaar ah taasina waxay noo oggolaanaysaa inaan nuqul ka samayno dhammaan xogta ugu muhiimsan ee qalabkeenna, oo ay ku jirto qaabeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Tababarada » Sida loo hagaajiyo qaladka darawalka WIA